Munaasabad lagu xusayay 15-ka May ee aas aaska Ururkii SYL oo xalay ka dhacay Muqdisho(Daawo Sawiro) | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Munaasabad lagu xusayay 15-ka May ee aas aaska Ururkii SYL oo xalay...
Munaasabad lagu xusayay 15-ka May ee aas aaska Ururkii SYL oo xalay ka dhacay Muqdisho(Daawo Sawiro)
Munaasabad lagu xusayay 75-guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatey xornimadii dalka ayaa xalay ka dhacday magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ubax dhigay Taalada SYL, waxaa wehliyay Wasiirka Dhalinyarada, Taliyeyaasha ciidamada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, iyadoo munaasabaddii xalay ay aheyd mid horudhac ah.
Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo xalay saqdii dhexe la maqlayay kooxda Baambeyda Muusikada oo garaacayay astaanta calanka iyo muusikada suugaantii xornimada dalka loo qaaday.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay meel sare uga jiraan xil walba horumarinta dalkooda, gaar ahaan waqtigii xornimo-doonka iyo hadda oo dalka uu soo kabanayo. Isagoo xusay in maalintan ay xusuusineyso dhalinta Soomaaliyeed sida loogu baahan yahay in midnimada laga shaqeeyo si looga dhabeeyo riyadii geesiyaashii SYL.
“15-ka May waa maalintii Halganka iyo Midnimada Dhalinyarada Soomaaliyeed ee u istaagay sidii ay waddankan iyo shacabkiisa looga xorreyn lahaa gumeysiga, caawana waxaan halkan u joognaa si aan u muujino taariikhdaas qiimaha badan iyo doorkii waddaninimo ee ay muujiyeen dhalinyaradii SYL”ayuu yiri Eng. Yarisow.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hambalyo u diray dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed munaasabadda 15-ka May oo ah udub dhexaadka dawladnimada iyo horumarka.
Waxaa maanta illaa caawa ka dhici doona magaalada Muqdisho munaasabado kala duwna oo lagu xusayo 15-ka May aas aaskii ururkii SYL ee ka koobnaa 13-kii dhalinyaro ee ka qeyb qaatay halganka xornimada Soomaaliya.
Previous articleFarmaajo ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed munaasabadda 15-ka May.
Next articleShirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka oo la soo gabagabeeyay.